Ndị nnọchi anya Madrid kpọrọ oku ka ha bịa na UNWTO Bribery Cocktail na Ritz: onye na-aga?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ndị nnọchi anya Madrid kpọrọ oku ka ha bịa na UNWTO Bribery Cocktail na Ritz: onye na-aga?
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
N'izu a, onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO ga-eji mmanya dị ukwuu na-anabata ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya obodo niile nke mba ndị nwere ikike na Spain n'ụlọ nkwari akụ kachasị ọnụ ma dị oke ọnụ na Madrid-Ritz.
UNWTO na-enwe mmasị inye ndị nnọchi anya ihe iri ngo maka nri abalị ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ - ọ na-egosikwa.
Zurab Pololikashvili, onye odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation ugbu a ga-eme njem n'izu a, dịka ozi natara. eTurboNews isi mmalite.
Na Jenụwarị, ọ bụkwa nri abalị na Madrid, yabụ nke a bụ ọnụọgụ abụọ.
Ole ndị bụ ndị nnọchi anya dị njikere ịga mmemme dị otú ahụ nke Georgia ma ọ bụ UNWTO na-akwado, ma bụrụkwa nke e mere iji nweta nkwenye nke Zurab Pololikashvilna maka oge Mgbakọ Mgbakọ nke Abụọ
Emebere ihe omume ahụ nke ọma, yabụ ndị nnọchi anya agaghị ajụ ajụjụ ma ọ bụ kwado votu nzuzo na Mgbakọ General. Olileanya, ndepụta ndị ọbịa ga-agbapụta.
Ebe obibi Madrid bụ Ritz:
Mandarin Oriental Ritz, Madrid bụ ọmarịcha obí Belle Époque nke dị na Triangle Golden Art nke Madrid ama ama. Kemgbe ihe karịrị afọ 110, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ anabatala ndị eze, ndị omeiwu, na ụfọdụ ndị ọbịa a ma ama na gburugburu ụwa. Ihe onwunwe a dị egwu bụ ihe atụ nke okomoko na ịdị mma.
N'ịbụ ndị UNWTO General Assembly si na Morocco kwaga Madrid na nkeji ikpeazụ, a na-atụ anya na ọtụtụ mba ndị na-aga nzukọ a ga-anọchi anya ndị nnọchiteanya nọ na Madrid.
Nke a bụ uru doro anya ma gbakọọ maka Zurab iji nweta votu nkwenye ya. Zurab bụ onye nnọchianya maka Republic of Georgia na Madrid ruo ọtụtụ afọ ma mara ụzọ ya na obodo diplomatic.
O meworị ka ikere òkè nke ndị ozi njem nlegharị anya bụrụ ihe siri ike ma dị oke ọnụ. Mba ndị ahụ nwere ndị nnọchianya na Spain ga-ezigara ndị nnọchianya, ọtụtụ mba ndị ọzọ anaghị atụ anya isonye ma ọlị.
Uru nke ndị nnọchi anya ịtụ vootu kama ndị ozi njem nleta
Ndị nnọchiteanya na-adị mfe karịa ka onye odeakwụkwọ ukwu kwenye. Zurab kwesịrị ịzenarị arịrịọ votu nzuzo iji nwetaghachi nhọpụta ya.
Ọ kwesịrị inwe ọtụtụ 2/3 nke mba ndị na-abịa na ntuli aka maka nkwenye ọzọ ya.
Otu na-eche ka ọtụtụ mba ndị otu, ndị na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ onyinye ha na-achọsi ike maka enyemaka bara uru sitere n'aka ụlọ ọrụ UN, ga-etinye aka n'omume jọgburu onwe ya.
Zurab na-enwe mmasị ịme ntụrụndụ, ọ na-arụkwara ya ọrụ mgbe niile.
Otu abalị tupu ndị isi oche ntuli aka maka ntuli aka ya na Madrid na na mmegharị nzuzo nke World Tourism Organisation, nri abalị emere iji nye mba 34 iri ngo agbakwunyere na mmemme ntuli aka UNWTO na Jenụwarị 2021.
Onye isi nri onye Spen bụ Dani García ga-akwadebe nri iri ngo na Four Seasons Hotel dị na Madrid kwụrụ ụgwọ ma na-aga nke Minista mba ofesi nke Georgia.
Nke a mere ka naanị onye so Zurab na-asọ mpi iwe were were kpata nku anya ebe niile. Onye na-asọ mpi si Bahrain abịaghị nri abalị ahụ.
N'afọ 2017, a gbanwere nri abalị ahụ site n'ịkpọ ndị nnọchiteanya na-eme ntuli aka n'egwuregwu football na-ere ere, site n'ikike nke ndị nnọchianya Georgian na Madrid.
UNWTO ga-enye mba 34 ihe iri ngo maka nri abalị, Georgia…
UNWTO bụ nke odeakwụkwọ ukwu: Echefuru na…
Ibo onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO ebubo na-eme ya onye ikpe…
Ntuli aka UNWTO gburu ezi omume ọ bụla fọdụrụ na…
UNWTO enweghị nkwanye ùgwù megide Bahrain bụ mmebi nke JIU…
Geoffrey Lipman kpọrọ oku maka ịdị mma na UNWTO…
Dị ka mgbe niile, eTurboNews nwara iji UNWTO kwenye, mana anabataghị nzaghachi ọ bụla. Daalụ Apetit!